निरन्तर तमासा::The Leader Of Nepal
भुवन केसी र साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहको विवाद टुंगिने छाँट छैन। एकपछि अर्को लफडा चलिरहेको छ। केही दिनदेखि साम्राज्ञी चुप थिइन्। पार्टी गरेको र लङ ड्राइभको मज्जा लिइरहेको स्टोरी हालेर बसिरहेकी थिइन्। लागेको थियो, यो च्याप्टर यहीँ सकियो। तर, यता भुवनले भने
भित्रभित्रै मुद्दाको तयारी गरिरहेका रहेछन्। नभन्दै उनले अदालत खोलेको भोलिपल्टै साम्राज्ञीविरुद्ध मानहानिको मुद्दा हाले। मुद्दासँगै उनले १० करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति पनि दाबी गरेका छन्। आफूलाई साम्राज्ञीले ‘परभर्ट’ भन्दै आफ्नो बदनाम गरेकाले अदालतको ढोका ढकढक्याएको भुवनको जिकिर छ। यता भुवनले साम्राज्ञीलाई मुद्दा हालिरहँदा अर्कातिर भने ‘ड्रिम्स’ प्रोडक्सन म्यानेजर गणेश सापकोटाले भने साम्राज्ञीमाथि नशालु पदार्थ सेवन गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यस प्रकरणमा भुवन नजोडिए पनि धेरैले भने सापकोटालाई भुवनकै आड रहेको अनुमान गरेका छन्। भुवनले मुद्दा हालेको खबरपछि साम्राज्ञीको केही प्रतिक्रिया आएको छैन। तर, उनले पनि भुवनको सामना गर्ने रणनीति बनाइरहेको चर्चा छ। यो प्रकरण तन्केको देखेर बाहिरबाट तमासा हेर्नेलाई दिक्क लागिसक्यो। भुवन र साम्राज्ञीलाई कहिले लाग्ने होला ?
बिहेपछि आँचल शर्मा कम युट्युब च्यानलमा देखिन थालेकी छिन् । अर्थात्, अन्तर्वार्ता दिने क्रम ठ्याप्पै रोकिएको छ । सायद विवाहलगत्तै दिएको अन्तर्वार्ताले दिएको झट्काको असर हो । त्यसभन्दा पर, आँचलमा अर्को परिवर्तन पनि आएको छ, त्यो हो फेसनको ।
आँचल विवाहअघि फेसनको मामलामा त्यति धेरै उम्दा लाग्दिनथिइन् । हेरिरहेकै, देखिरहेकै पहिरनमा देखिन्थिन् । तर, विवाहलगत्तै भने उनको फेसनमा व्यापक परिवर्तन महसुस गर्न सकिन्छ । भर्खरै एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन जाँदा उनले लगाएको लुगाले धेरैको ध्यान खिचेको छ । रातो रङको कटिङवाला गाउन लगाएर उनी वर्षा शिवाकोटीसँगै सोमा देखिएकी थिइन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेको यही पहिरनसहितको फोटोमा फ्यानले खुलेर तारिफ गरेका छन् । बिहेपछि धेरैको फेसन कुर्ता र सारीमा खुम्चन्छ । तर, आँचल झन्–झन् बोल्ड हुँदै गएको धेरैले महसुस गरेका छन् । के यो श्रीमान् उदिप श्रेष्ठको मायाको कमाल हो ?
क्याप्टेन बिजय लामा भोइस अफ नेपालको ब्लाईंन अडिसनमा,आवाज सुनेर यी जजहरुको चियर घुम्यो (भिडियो)
शिल्पाको पोल खोल्न मिडियामा आए निर्माता ओझा – ‘रेखाले सबै सम्पत्ति छाडिन्, शिल्पाले सबै माग्छिन्’ (भिडियो)
बलिउडमा चर्चित नायिका काजोलको तस्विरको चर्चा, फ्यानले भने दुई संतान हुँदा अझै पनि जवान देखिनु भएको छ दिदि
समुन्द्रको किनारामा घामको आनन्द लिदै निदाएकी प्रियंका चोपडा ले देखिन पति निक जोन संग यस्तो गरिरहेको सपना